फेरि सरकार परिवर्तनको कसरत सुरु, संकट टार्न मन्त्रालय थप्ने तयारी — Sanchar Kendra
फेरि सरकार परिवर्तनको कसरत सुरु, संकट टार्न मन्त्रालय थप्ने तयारी
मकवानपुर । केन्द्रमा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै बागमती प्रदेश पनि फेरी सरकार परिवर्तनको कसरत सुरु भएको छ । केन्द्रमा जस्तै नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एमालेकै खनाल–नेपाल पक्षसहितको गठबन्धनले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्ने पहल हुन थालेको छ ।
‘बागमती प्रदेशमा नेकपा एमालेको सरकार ५ वर्षसम्म कायम रहन्छ, हामी संविधानले दिएको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर गर्नुपर्ने सबै काम गर्छौँ,’ उनले भने, ‘अहिले मुख्यमन्त्रीको विषय ठुलो कुरा होइन । सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्छ, मुख्यमन्त्री तत्काल फेर्ने अवस्था छैन ।’
उनले मन्त्रालय थप गर्ने र मन्त्रिपरिषद हेरफेर र विस्तारको कार्यमा आफूहरु लागेको बताए । उनले भने, ‘यो, सरकारको अधिकारको क्षेत्रको कुरा पनि हो ।’ बागमती प्रदेश सरकारलाई २२ वटासम्म मन्त्रालय बनाउने अधिकार रहेको उनको भनाइ छ । सोही अनुसार हाल कायम रहेको ७ वटा मन्त्रालयको संख्या बढाएर ११ वटा मन्त्रालय पु¥याउने तयारी भइरहेको उनले बताए ।
यस्तै नेपाली काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशनको मिति नजिकिएसँगै जिल्लाहरुमा पनि नेतृत्वको होडबाजी सुरु भएको छ । सोही क्रममा प्रदेश १ का सबैजसो जिल्लामा सभापति पदका आकांक्षीहरु नेताहरुको विश्वास आर्जन गर्न र कार्यकर्ताहरुको मन जित्ने अभियानमा जुट्न थालेका छन् ।
तर यसपटक विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिकसमेत काँग्रेसमा समाहित भएको र राप्रपाबाट सुनिल थापासहितको समूह पनि काँग्रेसमा प्रवेश गरेका कारण समीकरण उल्टिने सम्भावना देखिन्छ । काँग्रेसमा सामेल भएका यी दुवै पक्ष सभापति शेरबहादुर देउवासँग निकट मानिन्छन् । कुन जिल्लामा को को छन् आकांक्षी ?
मोरङ- मोरङ सभापतिका लागि विशेषगरी केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइराला र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा खेमाका आधा दर्जन नेता लाइनमा देखिएका छन् । त्यसमा पनि देउवा इतर पक्षका नेताहरु सभापतिको दौडमा बढी छन् ।
सुनसरी- सुनसरी जिल्ला सभापतिको दौडमा काँग्रेसका तीन खेमाका नेताहरु अघि सरेका छन् । जिल्ला पार्टी सचिव केदार भण्डारी, फोरम लोकतान्त्रिकबाट काँग्रेसमा आएका प्रदीप चौधरी र उपसभापति सञ्जय श्रेष्ठ सभापतिका मुख्य आकांक्षी देखिएका छन् । यी तीनैजना काँग्रेसका छुट्टा–छुट्टै खेमाका नेताका रुपमा मानिन्छन् । जसमा भण्डारी देउवा इतर पक्षका नेता हुन् भने श्रेष्ठलाई देउवा निकट नेताका रूपमा चिनिन्छ । त्यसैगरी प्रदीप चौधरी भने विजय गच्छदारका खास सहयोगी मानिन्छन् ।
झापा- काँग्रेसमा तेस्रो ध्रुवका नेता मानिएका कृष्णप्रसाद सिटौलाको गृहजिल्ला झापामा पनि सभापति पदका लागि आकांक्षीहरुको लर्को देखिन्छ । झापामा सभापति पदका लागि त्रिपक्षीय भिडन्त हुने देखिएको छ । झापाको पार्टी सभापतिका लागि देउवा, कोइराला–पौडेल र कृष्ण सिटौला पक्षीय नेताहरू मैदानमा देखिन्छन् ।
ताप्लेजुङ- नेपाली काँग्रेस ताप्लेजुङकी सभापति लिला बोखिम दोधारमा छिन् । फेरि एक कार्यकाल सभापतिमा दोहोरिन पाउने सुविधा उपयोग गर्ने वा जिल्ला राजनीतिबाट बाहिरिने भन्नेमा टुङ्गोमा पुगिनसकेको बोखिमले रातोपाटीलाई सुनाइन् । सभापतिमा दोहोरिन भने दबाब बढेको उनको भनाइ छ । तर पौडेल समूहबाट पूर्वसभापति केशव दाहाल सभापतिमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा छन् ।
पाँचथर- नेपाली काँग्रेस पाँचथर सभापति नरेन्द्र केरुङ आसन्न अधिवेशनमा जिल्ला राजनीतिबाटै ‘रिङ आउट’ हुँदैछन् । पार्टी विधानले दुई कार्यकालभन्दा बढी सभापति हुन बन्देज लगाएपछि उनी यसपटक जिल्लास्तरको राजनीतिबाट बाहिरिने भएका हुन् । आफू केन्द्रीय राजनीतिमा प्रवेश गर्ने तयारीमा रहेको केरुङले रातोपाटीलाई सुनाए ।
इलाम- नेपाली काँग्रेसका पुराना नेता कुलबहादुर गुरुङको गृहजिल्ला इलाममा देउवा र पौडेल पक्षका दुई–दुईजना आकांक्षी छन् । पौडेल समूहबाट वर्तमान सभापति हिमाल कर्माचार्य र महासमिति सदस्य भेषराज आचार्यले आकांक्षा देखाएका छन् ।
तेह्रथुम- तेह्रथुमका जिल्ला सभापति गोविन्द ढुंगानाले दोस्रो कार्यकाल पूरा गरेका छन् । पार्टी विधान अनुसार अब तेह्रथुम जिल्ला सभापतिमा काँग्रेसले नयाँ अनुहार पाउने छ । जिल्ला नेतृत्वका लागि पौडेल पक्षबाट वर्तमान उपसभापति अर्जुन तुम्बाहाम्फे, सचिव सन्तोष सुब्बा र कमल ढुंगानाले आकांक्षा देखाएका छन् । यस्तै देउवा पक्षबाट १३ औं अधिवेशनमै गोविन्दसँग प्रतिस्पर्धा गरेका राज्यप्रसाद लिम्बुलाई अगाडि सार्ने सम्भावना देखिन्छ ।
धनकुटा- राप्रपा परित्याग गरी आएका काँग्रेस सहमहामन्त्री सुनिल थापाको गृह जिल्ला धनकुटामा ६ नेताले सभापतिमा आकांक्षा राखेका छन् । धनकुटामा देउवा, पौडेल र सिटौला समूह गरी त्रिपक्षीय भिडन्त हुने देखिन्छ ।
देउवा पक्षबाट वर्तमान सभापति अग्नि पौडेल, वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य मनोहरनारायण श्रेष्ठ, वर्तमान जिल्ला कोषाध्यक्ष दिनेश राई र सचिव विजयसन्तोषी राई सभापतिको आकांक्षी देखिन्छन् । पौडेल निकट क्षेत्रीय सभापति इन्दिरा थापाले पनि उम्मेदवार बन्ने बताएकी छन् भने सिटौला समूहबाट कमोट फागोले उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका छन् ।
ओखलढुंगा- केन्द्रीय नेता रामहरि खतिवडाको गृह जिल्ला ओखलढुंगामा पनि यो पटक काँग्रेसले नयाँ नेतृत्व पाउने छ । वर्तमान सभापति प्रदीपकुमार सुनुवारको दोस्रो कार्यकाल पूरा भएकाले अब जिल्ला नेतृत्वमा नयाँ अनुहार आउने भएको हो । प्रदीपको विकल्पमा देउवा समूहबाट वर्तमान उपसभापति तेजेन्द्र खनाल, सचिव रुद्र अधिकारी, अशोक कार्की र नवराज केसी आकांक्षी देखिएका छन् ।
संखुवासभा- उदयपुर: यो जिल्लामा पौडेल पक्षको बलियो उपस्थिति छ । तर यहाँ पौडेल पक्षबाटै जिल्ला सभापतिका तीनजना आकांक्षी देखिएका छन् भने देउवा पक्षबाट एकजना मात्र आकांक्षी छन् । पौडेल पक्षका वर्तमान सभापति दीपनकुमार श्रेष्ठले कार्यकाल दोहो¥याउने चाहना राखेका छन् । यद्यपि आफू आन्तरिक छलफलमै रहेको उनले रातोपाटीलाई बताए ।
भोजपुर- देउवा निकट केन्द्रीय सदस्य तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीको गृह जिल्ला भोजपुरमा पौडेल पक्षको उपस्थिति बलियो छ । पौडेल समूहनिकट वर्तमान सभापति नन्दमणि राईले पुनः सभापतिमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका छन् । पौडेल समूहकै पूर्वसभापति बालकृष्ण थापा, नेविसंघका पूर्व केन्द्रीय कोषाध्यक्ष विनोद बान्तवाले पनि सभापतिमा आकांक्षा देखाएका छन् । देउवा समूहका पूर्वसचिव हेमन्त मुकारुङ र सिटौला समूहबाट तरुण दलका केन्द्रीय उपाध्यक्ष उत्तम चापागाईं पनि सभापति पदका आकांक्षी देखिएका छन् ।
खोटाङ- जिल्ला सभापति पदका लागि खोटाङमा त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । १३ औं महाधिवेशनमा पौडेल पक्षबाट नरेशकुमार श्रेष्ठले जिल्ला सभापतिमा बाजी मारेका थिए । उनी दोहोरिने मुडमा छन् । यस्तै पौडेल पक्षबाटै क्षेत्रीय सभापति तीर्थराज भट्टराईले पनि सभापतिमा आकांक्षा राखेका छन् । यता, देउवा पक्षबाट पूर्वराज्यमन्त्री सर्वधन राई र सिटौला पक्षबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि भूपेन्द्रकुमार राईले जिल्ला सभापतिमा उम्मेदवारी दिने बताएका छन् ।
सोलुखुम्बु- काँग्रेस नेता बलबहादुर केसीको गृहजिल्ला सोलुखुम्बुमा जिल्ला सभापतिका लागि आधा दर्जनभन्दा बढी आकांक्षी देखिएका छन् । पौडेल पक्षबाट वर्तमान सभापति विनोदकुमार बस्नेतले दोहो-याउन चाहेका छन् । पौडेल पक्षबाटै खिलराज बस्नेत पनि जिल्ला सभापतिको आकांक्षी देखिएका छन् ।